Kooxaha Manchester United, Liverpool Iyo Arsenal Oo Raadinaya Laacibka Kooxda Brighton Ee Yves Bissouma.
HomeSuuqa kala iibsigaKooxaha Manchester United, Liverpool iyo Arsenal oo raadinaya laacibka kooxda Brighton ee Yves Bissouma.
December 22, 2020 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Yves Bissouma oo 24 jir ah ayaa ka tagay Lille kuna biiray Brighton ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa labo sano ku qaatay kooxda ka ciyaarta Premier League. Haatanna waxqabadka 24-sano jirka waxaa ogaaday kooxaha ugu tunka waaweyn Premier League.
Sida laga soo xigtay Express, oo loola jeedo wariye Jonathan Shrager, illaa iyo seddex kooxood oo waaweyn ayaa raadinaya ciyaaryahanka.
Manchester United, oo halis ugu jirta inay ka takhalusto Paul Pogba sannadka cusub ka dib , waxay indhaha ku haysaa bedelka suurtogalka ah.
Liverpool ayaa sidoo kale u aragta laacibkan inuu yahay xalka ugu macquulsan, maadaama Georginio Wijnaldum uu qarka u saaran yahay inuu ka tago kooxda .
Kooxda seddexaad ee weyn waa Arsenal. Iyaguna xiisaha weyn ayey u muujiyeen. Naadiga reer London ayaa kaliya dhowr dhibic ka sareysa heerka kooxaha hoose, waxayna u baahan tahay inay wax ka qabato suuqa kala iibsiga.
Bissouma wuxuu u ciyaaray Mali 16 kulan caalami ah wuxuuna u dhaliyay 3 gool. Wuxuu ku barbaaray AS Real Bamako wuxuuna ku biiray kooxda dhalinyarada Lille ee 2016.